Ubhaka wemihla ngemihla
Igxalaba / ingxowa yoMthunywa
Ibhulukhwe / Umkhono weLaptop
Umtya / ibhegi yeGym
Izixhobo zeDigital Bag
ekhaya / Indawo yokusebenzela
765 Ipapashwe ngu ulawulo Nov-13-2020
Lo ngumzi-mveliso wethu, ubekwe kwisiThili saseHuian Chengnan, eQuanzhou, isixeko esiselunxwemeni eFujian, China, Esonwabela udumo lwe "Isixeko seengxowa kunye namatyala".
Izikhwama Hongsheng yasekwa ngonyaka ka 1993. Le nkampani ekuqaleni inxaxheba kumashishini yorhwebo ezinxulumene kumazwe, kwaye ngaphezu kwexesha elithile ngokucothayo ezahlukeneyo kuyilo imveliso, uphuhliso, imveliso, kunye nolawulo chain chain ukuba iinkonzo iinkonzo ezivela kulo lonke ihlabathi.
Okwangoku, uphawu lwethu "MONKKING", olubhaliswe kumazwe angama-22 aphesheya kwezilwandle, kwaye sakha iiofisi zokuthengisa eMoscow, eRashiya naseXiamen, eChina, iyonwabela ngakumbi nangakumbi kwihlabathi jikelele.
Sisoloko sihambelana nomgaqo "Wokholo Olungileyo, uMgangatho, uLawulo lwezeNzululwazi", kwaye sinyanzelisa ukuba "uMgangatho wokuqala". Zibophelele ekubeni lishishini eliphambili kolu shishino, ukwenza uphawu lwasekhaya nolomeleleyo.
Ngaba kufanelekile ukuthenga iingxowa ze-UV ze-sterilizer?
Kutheni izinto zeRPET zithandwa?
0086-18205925267 0086- (0) 592-3665530 intengiso@hsbags.com Indawo yoShishino yaseChengnan, Huian, Quanzhou, Fujian